सभामुख–उपसभामुखले राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने ? सत्तापछ भन्छ– पर्दैन, विपक्षी भन्छ– दिनुपर्छ… — Newskoseli
सभामुख–उपसभामुखले राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने ? सत्तापछ भन्छ– पर्दैन, विपक्षी भन्छ– दिनुपर्छ…
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बनेका क्रमशः संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेमध्ये एकले राजीनामा दिनु पर्ने र नपर्ने विवादले सत्तापक्षीय नेकपा र विपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच फेरि अर्को द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।
एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भइसकेकाले एउटै पार्टीबाट सभामुख–उपसभामुख दुवै पद कायम राख्न संविधानले अनुमति नदिएको दावी कांग्रेसले गरेको छ ।
तर, पूर्वसभामुख एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख दुवैले राजीनामा दिनु नपर्ने तर्क गर्दछन् । सभामुख–उपसभामुख दुवै जनाले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकाले उनीहरू पार्टीको मान्छे नरहेको भन्दै राजीनामा दिनु नपर्ने जिकिर नेम्वाङले गरेका हुन् ।
सभामुख र उपसभामुख दुवै अहिले दलको सदस्य नरहेकाले कसले छोड्ने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने नेम्वाङले बताएका छन् ।
‘उहाँहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा गर्नुभएको छ र स्वीकृत समेत भइसकेको छ त्यसैले उहाँहरू हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न’– नेम्बाघ भन्छन् ।
संविधानको धारा ९१ (२) मा सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ । संसदमा एकभन्दा धेरै दलको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा वा उम्मेदवारी नै नदिएको अवस्थामा भने एकै दलको सदस्य प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपुग्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
नेकपाले औपचारिकता पाएपछि प्रतिनिधसभामा अब ४ वटा मात्रै ‘राष्ट्रिय दल’ कायम भएका छन् । सभामुख–उपसभामुखको चुनाव हुँदा सभामुखमा महरालाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख पदमा भने आफ्नै तर्फबाट पुष्पा भुषाललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, उपसभामुखमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) की उम्मेदवार डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएकी थिइन् ।
संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नमिल्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सभामुख–उपसभामुखमध्ये कुन चाहिँ पद छाड्ने हो, अब नेकपाले लिनुपर्ने कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले बताएका छन् ।
‘संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेरेर उहाँहरुले प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ’, रिजाल भन्छन्– ‘एउटै पार्टीको दुबै पदमा रहन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।’
राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भने फरक दलको हुनु पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । तर, संविधानको धारा १८२ को उपधारा (२) को (१) ले प्रदेश सभामुख र उपसभामुख पनि फरक राजनीतिक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।